ပစ္စည်းခရီးသွားလာအဖော်များ: ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုတစ်ခု NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » အဖော်မွန်ခရီးသွားပစ္စည်းကိရိယာမြား: A ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
အဖော်မွန်ခရီးသွားပစ္စည်းကိရိယာမြား: A ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
ဝံပိုငှက်ရဲ့ Hardback ဖြစ်ရပ်မှန်
မကြာခဏကြောင်း device ကိုရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်များရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင် - သင်က၎င်း၏သေတ္တာသို့မဟုတ်သေတ္တာထဲကပစ္စည်းကိရိယာများ၏တောက်ပသစ်အပိုင်းအစဆွဲထုတ်ကြောင့်ထူထောင်ပြီးတာနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအမှုနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းမျှမျှတတလျင်မြန်စွာစွန့်ပစ်နေကြသည်ဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်အစဉ်အမြဲပြန်သုံးဘို့တည်နေတဲ့ကွန်တိန်နာအတွင်းတင်ပို့ရကြပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဂီယာ set-တက်နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စတူဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုမကြာခဏကယ့်ကို re-ဘောငျခံရဖို့လိုအပ်ပါသလဲ? အချို့လူများကအထူး-ဖြတ်ရေကြောင်းရေမြှုပ်နှင့်အတူ boxes တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုပေမယ့်အနည်းငယ်သော့ချက်ပစ္စည်းများထက် ကျော်လွန်. - သည်အခန်းထဲရှိပါတယ်ဘယ်သူနည်း ဒါဟာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်မူလျှင်အာကာသကယ်ဖို့အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့သင်္ဘောပစ္စည်းများစှနျ့ရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်။ အားလုံးရိုက်ကူးရေးနဲ့ content မျိုးဆက်သို့သော်စတူဒီယိုထဲမှာတင်းကြပ်စွာပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်, သငျသညျ-up, ထုပ်ပိုးနှင့် Pre-လုပ်စတူဒီယို၏နှစ်သိမ့်ထားခဲ့ဖို့ရှိသည်။
သင်က, တစ်ဦးအားကစားဖြစ်ရပ်ရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်လမ်းကဆင်းလိုက်, ဒါမှမဟုတ်တချို့ထူးခြားဆန်းပြားတည်နေရာမှာ On-site ကိုရိုက်ကူးမယ့်ဖြစ်စေ, လယ်ပြင်သို့ထွက်သွားသည့်အခါ, သင့်ကိရိယာများလုံခြုံစွာခရီးစဉ်တလျှောက်ယူဆောင်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသောသူသည်အကြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အလွှာသမျှကတဆင့်သွားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါလိမ့်မယ် - ပဲအရောင်းစာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်အပေါ်သွားနဲ့တူ, သင့်ကိရိယာများအချို့ '' ခရီးသွားအဝတ် '' လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အမှုထမ်းအကာအကွယ်အလွှာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်သွားကြောင်း, ထို sturdier ခရီးသွားတွေအများကြီးမပါ။ utility နဲ့ကြာရှည်ခံမှုဒီများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ကြပြီးစတိုင်တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဖိုးတန်ဂီယာက၎င်း၏ခရီးစဉ်အတွင်းပါရှိသောခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, Re-အသုံးဝင်သောအလွယ်တကူအထူးပြုဖြစ်ပွားမှုနှင့်အိတ်ဒီဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ အတိအကျဘယ်လိုကဤ
ကွန်တိန်နာသင့်ရဲ့စတူဒီယိုရဲ့အရင်းအမြစ်များနှင့်အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်အတူတူထားနေကြသည်။ တစ်ဦးက start-up စတူဒီယိုဘတ်ဂျက်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပထမဦးဆုံးမှာအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ '' အိမ်မှာလုပ် '' ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်အားကိုးဖို့ရှိသည်မယ်; သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းanice ကြံ့ခိုင်တအရွယ်အစား-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံးကိစ္စတွင် padding ကိုများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့သတင်းစာများနှင့်အတူကျပ်။ သင့်ရဲ့စတူဒီယိုအဲဒီအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ဘွဲ့ရထားပြီးပြီးတာနဲ့သူကကောင်းကောင်းသင့်ရဲ့ဂီယာခရီးသွားကိုကူညီရရှိနိုင်မယ့်အဘယ်အရာကို peruse ဖို့အချိန်ပါပဲ။
အဘယ်မှာရှိပစ္စည်းကိရိယာများသွားနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်အခြေအနေများကိုသင်အလိုရှိပါလိမ့်မယ်ကိစ္စတွင်အမျိုးအစားအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ မြို့လယ်အားကစားဖြစ်ရပ်များဘရာဇီးမိုးသစ်တောတွေထဲမှာခြောက်လကဲ့သို့တူညီသောကင်မရာကိစ္စတွင်မယ်လို့ခိုင်လုံပါဘူး။ ဒေသခံအဘယ်အရာအခြေအနေများမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါသလဲ? သင်ရေအောက်, ဒါမှမဟုတ်လေထုထဲတွင်ဖြစ်ကောင်းဒဏ်ငွေသဲ, ဒါမှမဟုတ်တန်ဆာအမှုဖွင့်အရောင်များ၏သင်၏မူရင်းရွေးချယ်မှုကဲ့သို့တူညီသောအရောင်ရဲ့ဒေသခံတစ်ဦးအဆိပ်အပြင်းအင်းဆက်ပိုးမွှားခဲ့ကြသည်ကျိန်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ? ဤကဲ့သို့သောအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအချို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်းခံကြ၏။
custom-ဖြတ်မြှုပ်စျေးကိုအဆမတန်မြှအီလက်ထရွန်းနစ် hauling အဘို့အဓိပ်ပာတစ်ဦးအမှု၏အတွင်းပိုင်းတစ်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သေသပ်စွာကာကွယ်ပေးသည်နှင့် Keep ဟာကင်မရာမင်းကို အသုံးပြု. စေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောမျက်ကပ်မှန်သူ့ဟာသူအတွက် tool တစ်ခုဖြစ်သည်ခွဲထားခဲ့သည်အထောက်အကူပြုတစ်ဦးကကင်မရာကိုအမှု။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မယ့်အမှုစက်ချုပ်အနေနဲ့ငါ-Pad နောက်ကွယ်မှတစ်ထောက်ခံမှု easel တူသောစိတ်ဝင်စားဖို့ options များထည့်နိုင်သည်။ အထဲကအတွင်းအတွင်းပိုင်း Keeping နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြင်ပစျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့မဆိုအမှုနှင့်အတူထိပ်တန်းအရေးပါမှုသည်။
ဝံပိုငှက်ကုန်ပစ္စည်းများစျေးကြီးအီလက်ထရွန်းနစ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများအတွက်အမှုပေါင်းသွားကြဖို့အဆင်သင့်တဲ့ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့တည်ဆဲထုတ်ကုန်လိုင်းသင်သည်သူတို့၏စာရင်း၌သင်တို့၏စံပြအမှုရှာမနိုင်လျှင်, သူတို့ကလည်းသင့်ရဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်သင့်ကုမ္ပဏီလိုဂိုအားမရအပါအဝင်ထုံးစံအလုပ်, လုပျနိုငျကင်မရာများ, လက်ပ်တော့စသည်တို့ကို၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း။ ဝံပိုငှက်ကိစ္စများတွင်, သင်နှစ်ဆခွဲထားခဲ့သည်သောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သီးခြားအိတ်ကပ်ကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကို, ဘီး, တိုးချဲ့လက်ကိုင်, o-လက်စွပ်ဖျံ, ရှာတှေ့နိုငျ
ဝံပိုငှက်ရဲ့ Laptop ကိုညတွင်းချင်းဖြစ်ရပ်မှန်
400 lb. , ထိတ်လန့်ခုခံ, တံဆိပ်ခတ်သည့်အခါ (ကို item ှုမိုးသည်းထန်စွာမှမပါလျှင်) ရေအတွက်ကို float နိုင်စွမ်းမှစမ်းသပ်ပြီးတံခါးကျင်ပစ်; AND သူတို့တစ်တွေ 1ifetime အာမခံချက်နှင့်အတူလာ! Watertight, crushproof နှင့် dustproof; တခြား features များပါဝင်သည်: Over-ပုံသွင်းလက်ကိုင်တစ်ဦးအဆင်ပြေရော်ဘာ, ကိစ္စတွင်သို့အစိုဓာတ်ကိုဆွဲမပါဘဲပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဖိအား, သံမဏိ Hardware နဲ့သော့ခလောက်ကာကွယ်နှင့် built-in ပေါင်းစပ်သော့ခလောက်ပင် option ကို equalizes တဲ့ရှင်းလင်းမှုအဆို့ရှင်ကိုအလွယ်တကူ stackable ဖြစ်ခြင်း, အဆိုပါ Pick-N ကို-ဆွတ် convoluted အဖုံးအမြှုပ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတစ်ဦးအမြန်အမြှုပ် pad ပါသို့ဖြတ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးစုံဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်! ဝံပိုငှက်လည်းအသစ်သောဖျံနှင့်အစားထိုးရေမြှုပ်နှင့်တူအရှိဆုံး wear လက်ခံရရှိကြောင်းအမှုအပိုငျးမြား၏အစားထိုး stocks ။
အပိုဆောင်းထိုကဲ့သို့သောအဖုံးစီစဉ်အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, Divide, ကြိုး, အပိုလက်ကိုင်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါ, သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးကွန်တိန်နာများအတွက် optional ကိုဘီး Castor အစုံနှင့်အတူအထူးပြုထုံးစံကို လိုက်. panel ကိုဘောင်များနှင့်လှေကွင်းခတ်သငျသညျပင်လယ်မှာမဆိုရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာလျှင်။ သငျသညျမှာအလျင်အမြန်တစ်ဦးဝံပိုငှက်ကုန်သည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည် www.pelican.com/dealers/distributor_map.php။ ပစ္စည်းကိရိယာများ hauling များအတွက်ဖြစ်ပွားမှုအပြင်, ဝံပိုငှက်လည်းကြာရှည်ခံမှုအလားတူစံချိန်စံညွှန်းများရန်တည်ဆောက်အိတ်ထုတ်လုပ်တယ်။
ဝံပိုငှက်ထုတ်ကုန်များ, Inc အကြောင်း
ဝံပိုငှက်ထုတ်ကုန်များ, Inc က high-performance ကိုအကာအကွယ်ကိစ္စတွင်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်အဆင့်မြင့်ခရီးဆောင်အလင်းရောင်စနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မီးဘေးကင်းလုံခြုံရေး, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး, ကာကွယ်ရေး / စစ်တပ်, အာကာသ, ဖျော်ဖြေရေး, စက်မှုနှင့်စားသုံးသူအပါအဝင်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများစျေးကွက်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဝံပိုငှက်ထုတ်ကုန်တစ်သက်တာနောက်ဆုံးမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်နေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 19 ရုံးများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ခုနစျပါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူ, 28 နိုင်ငံများတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.Pelican.com or www.behrmancap.com.
အန်သိုနီရော်ဂျာ Beat ထုတ်လွှင့်ဖို့အများကြီးဆောင်းပါးများကိုလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့်အသံလွှင့်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်မကြာခဏမဂ္ဂဇင်း Beat ထားပါတယ်မီဒီယာ world.He ၏ Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စတူဒီယိုဒေသများ, လက်ရှိထုတ်လွှင့်အတွင်းကသူ၏ကုန်သွယ်မှုပြေးဆွဲမှုမရှိတဲ့အလွတ်တန်းစာရေးဆရာမ / စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းပုံဖော် - @Silverdraft နှင့်အတူ rendering - ဇန်နဝါရီလ 4, 2017
ဒါဟာရစ်ဖစ်ခြင်းမရှိဘဲသတင်းမဟုတ် - နိုဝင်ဘာလ 10, 2015
Sony က - ထို Edge အပေါ်နည်းပညာ - ဇွန်လ 24, 2015
အကြောင်းအရာ crushproof dustproof high-performance ကိုအကာအကွယ်ကိစ္စတွင်ဖြေရှင်းနည်းများ မျက်ကပ်မှန် အလင်းရောင် ဝန်စည် ဝံပိုငှက်မှုများ convoluted အဖုံးအမြှုပ်နှင့်အတူ Pick-N ကို-ဆွတ် Watertight 2014-12-21
ယခင်: RoboCam သင် Capture မည်!
နောက်တစ်ခု: AbelCine 54th နှစ်မြောက် Extravaganza Continues အဖြစ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, LLC LP သို့ '' 25 ဂန္ထဝင် tripod တစ်ဦးက New Winner ကြေညာ